Angelina Jolie oo Furiin Dalbatey iyo Warbaahinta oo…. - iftineducation.com
iftineducation.com – Atirishada caanka ah ee Hollywood-ka ka tirsna kuna baahay magaceeda daafaha caalamka Angelina Jolie ayaa la xaqiijiyay inay furiin ka dalbatay seygeeda jilaaga caanka ah Brad Pitt.
Angelina Jolie iyo Brad Pitt inkastoo mudo dheer isla nool yihiin hadana mudo labo oo kaliya ayay is qabaan sharci ahaan.
Majalada TMZ ayaa qortay in Angelina Jolie oo 41-jir ah ay warqad furiin dalbasho maxkamada u gudbisay sidoo kalena dooneyso in sharci ahaan seygeeda Brad Pitt furo madaama labadii bilood ee ugu dambeesay xiriirkooda aad u xumaa.
Waxayna sidoo kale Angelina Jolie dalbatay in lixda caruurta ah ee labadaan lamaane waalidka u yihiin in mustaqbalkooda iyo xuquuqdooda meel la saaro waxana xusid mudan in sedex ka mid ah caruurtan ay soo korsadeen balse aysan isku dhalin.
Waxay kaloo maxkamada ka dalbaday in Brad Pitt kaliya uu caruurtiisa soo booqan karo balse dhaman 6-caruurta ay Angelina Jolie la noolaan doonaan.
Dadka aadka ugu dhow labadaan lamaane ee caanka waxay sheegeen sababta ay ku kala tagayaan inay tahay in Angelina Jolie aysan ka helin qaabka uu Brad Pitt u gudan waayay waajibkiisa waalidnimo ama inuu caruurta ula dhaqmi waayay sida ay iyada rabto!
Warbixintaan sidoo kale waxaa lagu sheegay in Angelina Jolie aysan Brad Pitt waajib kaga dhigi doonin inuu caruurtiisa nafaqeeyo kana maaranto dhaqaalo ahaan madaama ay isku filan tahay.
Angelina Jolie iyo Brad Pitt Hollywood-ka ayay astaan u ahaayeen lamaane ahaan waxayna si rasmi ah isku guursadeen August 2014 ayagoo markaas xiriirkii 10-ka sano ka dhaxeeyay mid rasmi ah ka dhigeen.
Angelina Jolie waa guurkii sedexaad oo ay nolosheeda gasho midka ay haatan Brad Pitt u faaarujin doonto sidoo kalena Brad Pitt guurkiisa labaad ayuu u yahay midka haatan ka bur buray marka lagu daro.